Wararka - Qalabka Birta oo qabow la sameeyay, Alaab ceyriin ah iyo Isbarbardhigga Range iyo Heerarka Wanaagsan
Qalabka birta ee qabow-samaysan, kaas oo ku jiri kara maaddada?
Qalab bir ah oo qabow, kaas oo loo isticmaalo in lagu soo saaro bir-qabow-samaysan, oo ah nooc bir ah. Alaabta ceeriin ah, guud ahaan, biraha kulul ee duuban ama qabow ee duubnaa birta ayaa loo adeegsadaa biilasha, iyo foorarsiga iyo hawlgallo kale ayaa loo sameeyaa si loo helo biraha qabow-samayska leh oo leh qaabab iyo cabbirro kala duwan.
Waa maxay nooca qalabka birta qabow-samaysan ee loo arko inuu wanaagsan yahay? Waa kuwee badeecadaha ama warshadaha loo isticmaali karaa badeecadda la dhammeeyey?
Qalabka birta qabow-sameysan, heerarkeeda tayada wanaagsan, waxaa loogu talagalay qalabka tiknolojiyadda horumarsan iyo teknolojiyadda, waxay fududeyn kartaa hawlgalka iyo adeegsiga, tayada badeecadda la dhammeeyeyna waa la dammaanad qaaday. Iyo qalabka noocan ah, badeecada la dhammeeyay waa bir-qabow-samaysan, beerteeda dalabka ama warshadaha, waxaa loogu talagalay taageerada qorraxda, qaab-dhismeedka birta, qalabka kaydinta iyo beeraha kale, marka lagu daro, sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa warshadaha baabuurta.
Waa kuwee noocyada kala duwan ee qalabka birta qabow-samaysan iyo qalabka birta midabka leh ayaa ka weyn?
Qalabka birta qabow-samaysan iyo qalabka birta midabka leh, haddii aad isbarbar dhigto labada aag, markaa baaxadda birta qabow-samaysku way ka weyn tahay, maxaa yeelay daboolkiisu waa inuu noqdaa mid aad u ballaaran, iyo qalabka birta midabka, qayb uun, sidaas noqo gunaanad. Waxaa intaa dheer, waa inaan tan maanka ku haynaa oo aan sidaas yeelnaa.
Qalabka birta qabow-sameysan, ee la yaqaan iyo fahamkiisa, waxaan aaminsanahay in maqaalkan, aan ku qoto dheerno, oo aan isku meel ku joogsan doonin, laakiin waa inaan si taxaddar leh u akhrinaa, oo aan taxaddar lahayn, si aan u fahanno aqoontaas Waqti ku habboon Mawduucan, sidaa darteed, si wanaagsan u isticmaal oo u oggolow naftaada inaad ka faa'iidaysato.